ကိုဗစ်ကို ပိုက်ဆံယူပြီး အပြင်မှာ စစ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန် မှားလား? မှန်လား? - Zet Star
ကိုဗစ်ကို ပိုက်ဆံယူပြီး အပြင်မှာ စစ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန် မှားလား? မှန်လား?
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်က ကိုဗစ် စစ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန် အဖမ်းခံရတဲ့ သတင်းတွေ့လိုက်တယ်။ ထင်ကြေးတွေနဲ့ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးက ဝေဖန်ကျတာတွေ့ရတော့ ကာကွယ်ရေး ရှုထောင့်က အပြုသဘောနဲ့ အောက်က စာလေးဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး စစ်ပေးတဲ့ ဆရာ မှားလားကစပါမယ်။ တည့်တည့် ဖြေရရင် မှားပါတယ်။ ကျနော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အခု နိုင်ငံတော်က သုံးပြီး စစ်ပေးနေတဲ့ Testkit မျိုးတွေ ရောင်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်။ သူများစီးပွါးရေးမို့ မဝေဖန်လိုပေမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်မှားပါတယ်။
ဘာလို့လည်း? ကိုဗစ်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါပါ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်သမျှ သေသမျှ စာရင်းကို အူမချေးခါးမကျန် အဆင့်ဆင့် တင်ပြရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ အထိ ဒီ Data ရောက်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် WHO အပါအဝင် ကုလ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများက ကာကွယ်ရေး နဲ့ ရောဂါရှာဖွေရေး အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပါတယ်။
Test kit, Reagent အပါအဝင် နည်းပညာပိုင်းရော အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းရဲ့ စစ်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ရေးရော အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ဖြစ်တဲ့သူ သေတဲ့ သူကို စာရင်း အတိအကျ ပြကိုပြရပါတယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်းမှ မဟုတ်ပဲ လက်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်ရဲ့ Data ရှိပါတယ်။
ကိုယ်စိတ်ချချင်လို့ စစ်တာ မရဘူးလား ဆိုပြီး မေးစရာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ Negative ဖြစ်ရင် ပြဿနာ မရှိလောက်ဘူးဆိုပြီးရလည်း အတွန့်တက်ကောင်း တက်ပါလိမ့်မယ်။ တည့်တည့်ပြောရရင် ပြဿနာရှိပါတယ်။ နှစ်ချက်ကြောင့်ပါ။
ပထမ အချက်က Test kit ကိုယ်၌က ပြဿနာရှိပါတယ်။ အဖြေကို အတိအကျ ယုံမရတာတစ်ခုတည်းနဲ့ မစစ်သင့်ပါဘူး။ ရောဂါရဲ့ သဘာဝအရ ၃ ရက်မှ စပြီး P ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ခံအား ကောင်းနေရင်၊ အချို့ အခြေအနေတွေမှာ P မဖြစ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ၇ ရက် နောက်ပိုင်းဆို ပိုးရှိနေရင်တောင် Negative ပြနိုင် တယ်ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက္ခဏာ အရ သေချာနေတဲ့ သူတွေ Test kit နဲ့ စစ်လို့ Negative ပြတဲ့ အခါ PCR နည်းနဲ့ ပြန် စစ်ပါတယ်။ PCR ကတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသေချာပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က “False sense of security” ရနိုင်ပါတယ်။ ငါ့မှာ ကိုဗစ် မရှိဘူးဆိုပြီး ပေါ့လျော့ရင် ကိုယ့်ကိုလည်း ကူးနိုင်ခြေ ပြန်မြင့်သလို ကိုယ့်မှာရှိပြီး အဖြေ Negative ပြရင်လည်း ဖြန့်ဖြူး သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကြောင့် စစ်ပေးသူ ဆရာ ဝန်က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေး ယူခံရသင့်ပါတယ်။ လူသားဆန်တဲ့ ဘက်က ကြည့်ရင် တော့ ဆရာဝန် မမှားဘူးလို့ ယူဆနိုင်ကောင်း ယူဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျင့်ဝတ်အရလည်း ကျင့်ဝတ်ပျက်တယ်လို့ မယူဆနိုင်ပါဘူး။
ဖမ်းလိုက်တဲ့ အကြောင်းထဲမှာ ပိုက်ဆံ ယူပြီး စစ်လို့ဆိုတဲ့ ပုံစံ ဆန်ဆန် ပြောထားပါတယ်။ တကယ်က ပိုက်ဆံမယူလည်း ဖမ်းလို့ရပါတယ်။ ပိုက်ဆံ ယူတယ် ဆိုတာဟာ ပစ္စည်းဖိုး PPE ဖိုး ရှိပါတယ်။ PPE တစ်စုံ အပြည့် အစုံဆိုရင်ကို ၂၀၀၀၀ ပတ်ချာလည်ရှိပါတယ်။ Test kit က ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး ၂၅၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ ၆၀၀၀၀ ကမများပါဘူး။
ဖြစ်သင့်တာက မိသားစုက အစစ် မခံတာမျိုး မလုပ်ပဲ အစိုးရ ရဲ့ စစ်ဆေးမှုကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံဖို့လိုတာပါ။ အခုတော့ မလိုအပ်ပဲ ဒုက္ခရောက်ကျရပါတယ်။ Self-test အတွက် တတ်နိုင်သပဆိုရင် စစ်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နားမှာ ကိုဗစ် ရှိနိုင်နေသေးတယ်၊ ကိုယ့်မှာ ကိုဗစ် ရှိနိုင်နေသေးတယ် ဆိုတာ လုံးဝ လုံးဝ မမေ့ကြပါနဲ့။ အသိအမှတ်ပြု စင်တာတွေ မှာ ဖြစ်နိုင်ရင် အစစ် ခံကြပါ။ ရောဂါအကြောင်း ကမ္ဘာကတောင်သေချာ မသိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သိတာလည်း အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။
← ကမ္ဘာအနှံ့ ပေါ်လာတဲ့ သတ္တုတိုင်ကြီးတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က မြွေကြီးတွေရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဆက်နွယ်မှုများ
ကလေးအမြွှာမွေးရင် ပြာနဲ့ဖုံး စီရင်ပြီး မိဘတွေကို လေးဘက်ထောက် သွားခိုင်းတဲ့ ဓလေ့ဆိုးရှိတဲ့ရွာ →